Maamulka Jaaliyada DDSI Ee Degmada Willmar Oo Ladhisay - Cakaara News
Maamulka Jaaliyada DDSI Ee Degmada Willmar Oo Ladhisay
Willmar(CN) Isniin, 5tii October 2015, kulan lagaga arinsanayay kaqayb qaadashada horumarka balaadhan ee kasocda deegaanka soomaalida itoobiya oo ay isugu yimaadeen jaaliyada kunool magaaladawillmar iyo maamulka sare ee North America ayaa lagu dhisay maamulka jaaliyada kunool degmada willmar.
Magaalada willmar ee Gobolka Minnesota waxaa kunool jaaliyad xoog badan oo kasoo jeeda DDSI taageersana XDSHSI iyo Shaqada wanaagsan ee uu qabtey 5tii Sano ee lasoo dhaafey oo deegaanka laga hirgaliyey horumar badan kadib markii nabada salka loo dhigey.
Shirkan ay isugu yimaadeen bulshada qeybaheeda kaladuwan iyo maamulka sare ee North America oo uu hor kacayo Gudoomiyaha Jaaliyada North America Mudane Mohamed Shugri Nuur iyo masuuliyiin kale oo katirsan maamulkiisa ayaa lagu dhisay maamulka jaaliyada Degmada Willmar ee Gobolka Minnesota laguna doortey maamul loo dhan yahay oo kakooban 13 xubnood oo kala ah: Khadar Mataan-Gudoomiyaha jaaliyada willmar, Mohamed abdullahi- G/kuxigeen, gudoomiyaha xisbiga-Maxamed daacad, Afhayeenka-Muxyo Dayib, Madaxa Arimaha Dumarka-Sacda axmed kongo iyo 7 xubnood oo kale.
Wuxuuna maamulka sare ee jaaliyada North America ee kasoo jeeda DDSI islaqaatay hoostana kaxariiqay sidii looga qaybqaadan lahaa loona garab istaagi lahaa URURKA Horumarinta Soomaalida Itoobiya (UHSI). Ururkan oo ah urur horumarined oo lagayegleeley DDSI oo la, aas aasey sanadkii 2012 loona aasaasey inay daboosho daldaloolada iyo wixii qabyo kanoqda ee ubaahan in wax laga qabto.
Hadaba Shirkan kaqabsoomay Willmar ayaa ah mid shacabka kunool Minnesota ay kutaageerayaan tusayaana xukuumada DDSI inay qayb kayihiin kana sii ahaan doonaan dadaalada xukuumadu ugu jirto inay shacabka deegaanka kaga saarto saboolnimada oo ah cadawgeena koobaad ee maanta.
Ugudanbayna, dadka kasoo qaybgalay shirkan oo aad u tiro badnaa ayaa carabka ku dhuftey oo qiray in xukuumada DDSI ee maanta ay tahay xukuumad dhibka laqaybsanaysa shacabkeeda ay masuulka katahay oo ay kago'antahay kamidho dhalinta horumarka loo baahan yahay oo itus oo itaabsii ah iyadoo shacabka kahadlay shirka ay dhamaantood kamarakaceen inuu deegaankeenu kutalaabsaday horumar xawli ah oo aan soo noqosho lahayn. Waxaa intaa dheer, in jaaliyada North America dhamaanteed ay usoo hambalyaynayso Raisal wasaaraha dalka mudane Hailemariam Desalegn xilka mar labaadka loo doortay. iyagoo jaaliyadu hambalyo taa lamid ahna usoo diray Xukuumada DDSI iyo XDSHSI horumarka ay deegaanka gaadhsiiyeen.